Umxokozelo Pokemon Ekuhambeni Apk Zakamuva Version Game For Amadivaysi Android
Isinyathelo ngaphandle futhi ukubamba Pokémon emhlabeni wangempela! Ukuqoqa &amp; ngilwa nabanye.
Thwebula Apk (97.30 MB)
4.1 (82.3%) 11,472,579 Amavoti
I-Pokémon GO manje isethule isici sezimpi zoqeqeshi. Jabulela izimpi ze-Pokémon ezodwa kanye nabanye abaqeqeshi abaseduze, noma usebenzise ukulwa nabaholi beqembu u-Spark, uCandela, noBlanche! Abaqeqeshi bangathola imivuzo yokubamba iqhaza empini futhi babonise amakhono amnandi we-Pokémon kwelinye labathathu abaqeqeshi bezempi.
Joyina Abaqeqeshi emhlabeni wonke abathola i-Pokémon njengoba behlola izwe elibazungezile. I-Pokémon GO iyinhlangano yokudlala yomhlaba wonke elandelwe izikhathi ezingaphezu kwezigidi ezingu-850 futhi ibizwa ngokuthi "I-Best Hambayo Game" ngemiklomelo ye-Game Developers Choice kanye ne-"App Best of the Year" yi-TechCrunch.
I-Venusaur, i-Charizard, i-Blastoise, iPikachu, namanye ama-Pokémon amaningi atholakale!
I-Pokémon yilapho, futhi udinga ukuyithola. Njengoba uhamba eduze komakhelwane, i-smartphone yakho izodlidliza uma i-Pokémon eseduze. Thatha umgomo bese uphonsa i-Poké Ball ... Uzodingeka uhlale uqaphile, noma kungenzeka uhambe!
Sesha kabanzi ne-Pokémon nezinto
I-Pokémon ethile ibonakala eduze nemvelo yawo-bheka i-Water-type Pokémon ngamachibi nolwandle. Vakashela i-PokéStops ne-Gyms-etholakala ezindaweni ezithakazelisayo ezinjengamamyuziyamu, ukufakwa kobuciko, izimpawu zomlando, nezikhumbuzo-ukubeka imali kwi-Poké Balls kanye nezinto eziwusizo.
Ukubamba, ukuxosha, ukuguquka, nokuningi
Njengoba ukhula, uzokwazi ukubamba i-Pokémon enamandla kakhulu ukuqedela i-Pokédex yakho. Ungangezela kuqoqo lakho ngokuqeda ama-Pokémon Amaqanda ngokusekelwe emabangeni ohamba ngawo. Siza i-Pokémon yakho iguquke ngokubamba izinhlobo eziningi ezifanayo. Khetha i-Buddy Pokémon ukuhamba nayo futhi uthole i-Candy ezokusiza ukwenza i-Pokémon yakho ibe namandla.
Ukuncintisana emaqenjini ama-Gym adumile
Uzojoyina elinye lamathimba amathathu nempi yobunikazi be-Gyms nge-Pokémon yakho eceleni kwakho. Njengoba i-Charmander yakho ivela kuCharmeleon bese i-Charizard, ungakwazi ukulwa ndawonye ukuze unqobe i-Gym futhi unike i-Pokémon yakho ukuyivikela kuwo wonke ama-comers.
Ithimba ukuze unqobe ama-Raid Bosses anamandla
I-Raid Battle iyinhlangano ye-gameplay ebambisanayo ekhuthaza ukuthi usebenze nabanye abaqeqeshi abangaba ngu-20 ukunqoba i-Pokémon enamandla kakhulu eyaziwa ngokuthi i-Raid Boss. Uma uphumelela ukunqoba empini, uzothola ithuba lokubamba i-Pokémon enamandla eyakho!
Sekuyisikhathi sokuhamba-izenzakalo zakho zokuphila kwangempela zilindele!
- Lolu hlelo lokusebenza lukhululekile futhi lunikeza ukuthengwa kwamageyimu. Ilungiselelwe ama-smartphone, hhayi amaphilisi.
- Iyahambisana namadivayisi we-Android anama-2GB RAM noma ngaphezulu futhi abe ne-Android Version 4.4-7.0 + efakiwe.
- Ukuhambisana akuqinisekisiwe ngamadivaysi ngaphandle kwamandla we-GPS noma amadivayisi axhunyiwe kuphela kumanethiwekhi we-Wi-Fi.
- Ukuhambisana namadivayisi we-tablet akuqinisekisiwe.
- Isicelo asikwazi ukugijima kumadivayisi athile ngisho noma kunezinguqulo ezihambisanayo ze-OS ezifakiwe.
- Kunconywa ukudlala ngenkathi kuxhunyiwe kwinethiwekhi ukuze uthole ulwazi olunembile lendawo.
- Imininingwane yamanje njengangomhla kaDisemba 4, 2018.
I-stickman legend: isithunzi sempi - izinqola ze-ninja
Umshayeli Wetekisi 2019
indiza engenamkhawulo - indiza ye-flight simulator
ibhasi simulator vietnam
i-pepoland: tsw - Thug Life Simulator [premium]
imfihlakalo yenqaba yase-blackthorn
I-quiz million indonesia million 2018 ngaphandle
Hry potter: hogwarts imfihlakalo
i-realmcraft ngezikhumba ezithunyelwa kuma-minecraft
I-super bino iyahamba - imidlalo entsha 2019
Izwe lika-victo - i-jungle adventure - umhlaba omkhulu
I-hotel transylvania adventureures - run, jump, build!
Uhambo lukaJune - into efihliwe
icala lobugebengu: i-pacific bay
i-super jake's adventure
I-sniper ops - umdlalo wesiteleka esiphezulu esiphezulu sokudubula umdlalo
idolobha elifihlekile: into efihlekile yento
i-battlelands isiteleka-umdlalo wokudubula umlutha womlutha
isigodlo namaqhawe: 3d RPG